IiTattoos zeengonyama zabantu abakhaliphileyo naboyikekayo | Ukuzoba
Iitattoos ezingabantu abakhaliphileyo naboyikekayo
Los Iitato Kwiingonyamakazi, njengoko unokulindela, zifanekisela yonke into efuziselwa zezi zilwanyana zixabisekileyo. Eyaziwa ngokuba ngabazingeli kunye nethuku labo, kunye nobuhle babo, iingonyamakazi sisilwanyana sasendle esifanele ukuvelisa kwakhona kumvambo.
Kungenxa yoko, sililungiselele eli nqaku kunye Iitato Iingonyamakazi kunye nentsingiselo yazo ukuze ufumane ukuphefumlelwa.
1 Zithetha ntoni iitattoos zeengonyama?
2 Kwaye enye?
3 Kwaye ukongeza phezulu: kukuchukumisa kwase-Egypt
Zithetha ntoni iitattoos zeengonyama?
Kwiinkcubeko ezininzi iingonyamakazi zihambelana neentsingiselo ezimbini ezinokubakho: eyokuqala, Sisilwanyana esoyikekayo nesikrelekrele kakhulu ekufuneka sisebenze nezinye iimazi zeengonyama njengeqela ukuzingela nokuzisa ukutya kwikratshi labo (iingonyama ezingamadoda ziyazi kuphela ukugxotha iimpukane ngemisila yazo).
Kungenxa yoko, Enye yeentsingiselo eziphambili ezinxulumene nolu hlobo lweetoto ezinxulumene noburharha, ikratshi kunye nesidima idluliswa zezi zilwanyana zixabisekileyo.
Enye intsingiselo yeetattoos zeengonyama inxulunyaniswa ngokusondeleyo nenye inkalo ephawula ezi zilwanyana: ithuku lazo elikhulu lokukhusela. Iingonyamakazi ziwakhusela amathole azo ngobomi bazo, ukuba kukho imfuneko, ke olu yilo lulungile ukuba ufuna ukudlulisa ukuba uya kunikela ngobomi bakho kubantwana bakho, okanye inyani yokuba uziva ukhuselekile kusapho lwakho, ngakumbi abantwana bakho, kwaye ukulungele ukuncama izinto eziyimfuneko kubo.
Kwaye ukongeza phezulu: kukuchukumisa kwase-Egypt
Ekugqibeleni, iiTattoos zeengonyama zinokudibana nothixokazi wase-Egypt uSekhmet, owayenobuso bengonyamakazi kwaye wayengumkhuseli wabasetyhini kunye nabo bonke abo babahloniphayo. Lo thixokazi wamandulo wase-Egypt usenokuba kukujija ubulinde i tattoo yakho entsha.
Akumangalisi ukuba iiTattoos zeengonyama zifana nezi zilwanyana, ziyoyikeka kwaye zintle. Khawusixelele, unayo iitatoos zesi silwanyana? Khumbula ukuba ungasixelela ukuba ufuna ntoni kumagqabaza!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » IiTattoos zezilwanyana » Iitattoos ezingabantu abakhaliphileyo naboyikekayo
Iitattoos zamagqabi omileyo, ukulangazelela ukwindla
Iimpawu zezilwanyana kunye neentyatyambo, indibaniselwano eziliwaka ngeentsingiselo eziliwaka